Mas’uul sare oo katirsan gudiga Doorashooyinka dalka Kenya oo la dilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Mas’uul sare oo katirsan gudiga Doorashooyinka dalka Kenya oo la dilay.
On Aug 1, 2017 283 0
Warbaahinta iyo Shacabka Kenya ayaa aad u hadal haya, dilka mas’uul sare oo katirsna gudiga Doorashooyinka dalka Kenay oo la filayo in dhawaantan la qabto.
Kariis Musando oo ahaa mas’uulka qeybta Technologiyada iyo macluumaadka ee Gudiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya ayaa maalintii Isniinta waxaa la helay isagoo meyd ah.
Waxaa la waayay 3 maalmood ka hor, iyadoona la garan waayay halka uu jaan iyo cirib dhigay, illaa maalintii Isniinta la helo isagoo meyd ah.
Mas’uuliyiinta dalka Kenya ayaa illaa iyo hadda ka gaabsanaya bixinta macluumaad la xiriira sida loo dilay ninkan, waxaana dhakhtar arkay meydka Sarkaalkan uu dowladda Kenya ka dalbay in la baaro sababta keentay dilka Musando, isagoona intaa raaciyay in jirkiisa ay ka muuqato tacdiib iyo jirdil xoogan oo uu la kulmay ka hor inta aan la dilin.
Booliiska Kenya waxay sheegeen iney socdaan baaritaanno lagu ogaanayo cidda ka dambeysa dilka Madaxii Technologiyada iyo macluumaadka ee gudiga doorashada dalka Kenya.
Mucaaradka dalka Kenya ayaa ku baaqay in la cadeeyo sababta keentay dilka mas’uulkan oo ay ku tilmaameen in dilkiisa ay horseedi doonto isdaba marin iyo in lagu shubto cod bixinta, taas oo horseedi karta rabashado la mid ah kuwii ka dhacay dalka Kenya sanadkii 2007 oo kale.
Waxay rumeysanyihiin Mucaaradku in ka hor inta aan la idling Kariis Musando laga qaatay Password-dii uu hayay oo ah kuwa muhiim ah cod bixinta iyo doorashada soo socota, waxaana farta ay ku godantahay in dilkan ay ka dambeeyaan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo Uhuru Kenyatta.
Dadka wax odorasa waxay sahdaalinayaan in doorashada sanadkan aysan u dhici doonin si caadi ah, islamarkaana ay jiri doonaan ku shubasho, taas oo shakki la’aan keeni doonta isku dhecyo dhiig badan ku daato.